Nin ay ku marqaati fureyso 40 qof – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Nin ay ku marqaati fureyso 40 qof
Waa uu beeniyay in uu falka geystay, balse waxaa maxkamadda mid mid loo hor keenayaa illaa 40 qof oo ku marqaati kacaysa in uu isaga falka ka dambeeyay, sheekeysana waxa ay ogyihiin.
Sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Copenhagen oo ay dacwadda ka furantay, dacwad oogayaasha ayaa qalbac qalbac isula doonanaya cadaymaha kala firirsan ee dambigan oo markii horeba aad isugu murugsanaa.
Hadalo is burinaya ayuu booliiska u sheegay Peter, mar ka mid ah waxa uu sheegay in ay ku dhimatay markii uu quusay markabkii ay wada saarnaayeen labadooda kaliya, marna wuxuu sheegay in ay dhimatay, kadibna uu badda ku aasay.
Waxaa suurtogal ah in xabsi daa’in lagu xukumo haddii lagu helo dambigan, kaas oo sharci ahaan dhan muddo dhan 15 illaa 17 sano oo aanan qofka la siin doonin cafis.
Ms Wall ayaa horey uga soo warantay dalalka Kuuriyada Waqooyi, Uganda, iyo Haiti, iyada oo u shaqaysay wargeysyada New York Times, Guardian, Vice, iyo South China Morning Post.
← Maxay ka dhigantahay booqashada dhaxalsuge Maxamed Bin Salmaan ee Britain?
Ra’iisal wasaare Kheyre oo la kulmay kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka →